သမီးအရင်းကို ဖခင်ဖြစ်သူမှ သားမယားအဖြစ် အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုကျင့် 😢 – Myanmar Magazine
သမီးအရင်းကို 11နှစ်​အရွယ်​ကတည်းကအကြိမ်​ကြိမ်​ပြုကျင့်​လာတာအခု သမီးဖြစ်​သူ21ပြည့်​တဲ့အထိ ။ ရေးမြို့နယ် ကျောက်မိချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်မိချောင်း(မြောက်)ရွာ နှစ်တန်ကူးခြံစု ကွမ်းသီးခြံတွင်းနေ. မ……(21)….နှစ်(ဘ)ဦးဝင်းသန်းထွန်း(ခ)သားကြီး စက်ချူပ်လုပ်ကိုင်သူ နေအိမ်တွင်နေထိုင်ပြီး 1.1.2019. 10:00 နာရီ အချိန် နေအိမ်တွင်တဦးတည်းရှိနေစဉ်
ဖခငိဖြစ်သူ ဦးဝင်းသန်းထွန်း(ခ)သားကြီး(40)နှစ်(ဘ)ဦးသန်းအောင် သည် ကျေးရွာအတွင်းမှနေအိမ်သို့ပြန်ရောက်လာပြီး ဖခင်ဖြစ်သူမှPhone မသုံးရန်တားမြစ်သည်ကို Phone အသုံးပြုနေသည့်အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းသန်းထွန်းမှဆဲဆိုရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး 2.1.2019. ရက်နေ့ 19:00 နာရီအချိန်ခန့်တွင် မိသားစုနှင့်အတူ ရှိနေစဉ်
ကျောင်းရွာတွင်နေထိုင်သော အဖွားဖြစ်သူထံ သွားမည်ဟုဆိုကာ ဆိုင်ကယ်ဖြင့်ခေါ်၍ နေအိမ်မှထွက်လာခဲ့ပြီး အဖွားဖြစ်သူထံသို့မသွားဘဲ နေအိမ်နှင့်ကိုက်(300)အကွာ ရာဘာခြံသို့ခေါ်သွားပြီးPhone ကိုင်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရည်းစားထားသည်ထင်ပြီး မ……အား” နင်တော်တော်လင်လိုချင်နေတာလား?”ငါလုပ်ပေးနေတာတောင်အားမရဘူးလား? ဟုပြောဆိုကာ
မ…….အား သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ကာ မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်ပြောရင် သတ်ပြစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခါ နေအိမ်သို့ပြနိခေါ်လာခဲ့ပြီး နောက်နေ့ရက်များတွင်လည်းနေအိမ်တွင် မိသားစုဝင်များမရှိသည့် အချိန်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူမှ မ…..အား အကြိမ်ကြိမ်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး
မိခင်ဖြစ်သူကိုပြန်ပြောပြလျှင် နင်နှင့်နင့်အမေ နှစ်ယောက်စလုံးကိုသတ်ပြစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူအား မပြောဖြစ်ဘဲ ရှိနေခဲ့ပြီး ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဝင်းသန်းထွန်း(ခ)သားကြီးမှာ မ………အသက်(11)နှစ်(5)တန်းတွင်ပညာသင်ကြားစဉ်ကတည်းက. အိမ်တွင်မိသားစုဝင်များ မရှိခင်အချိန်တိုင်း အကြိမ်ကြိမ်သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်ခဲ့ပြီး
ယ္ခုအချိန်တွင် ၎င်းနှင့်မိခင်ဖြစ်သူတို့၏ အသက်အန္တရာယ် ကိုပါ စိုးရိမ်ရသည့်အနေအထားသို့ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆို လာပြီး မ………အားသားမယားအဖြစ် ထပ်မံ စော်ကားလာနိုင်သည့်အတွက် 8.1.2019 ရက်နေ့တွင် မိခင်ဖြစ်သူအားပြောပြ၍ မိခင်ဖြစ်သူမှ ကျေးရွာ ရွာခွဲခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းထိုက်နှင့်ဆယ်အိမ်မှူး ဦးလှရွှေတို့အား တိုင်ကြားပြီး
မ……..မှသားမယားအဖြစ်အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်သူ ဖခင်အားအရေးယူပေးရန် 9.1.2019 ရက်နေ့ 15:30 နာရီတွင် တရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး မ……:::.၏တိုင်ကြားချက်အပေါ် မမစ(ရေး)(ပ)13/2019. ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ 376. အမှူ့ကြီးနှစ်စဉ်အမှတ်(2/2019) အရ9.1.2019. 15:30 နာရီအချိန် အမှူ့ဖွင့်ခဲ့ပြီး အမှူ့အား ရဲ 5339 ဒုရဲမှူး ဝင်းမြင့် မှစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ကာ
တရားခံ ဝင်းသန်းထွန်း(ခ)သားကြီး အား9.1.2019. 15:45 နာရီ အချိန် အမှူ့ဖြင့်ဖမ်းဆီးပြီး ချူပ်ရီမန်တောင်းခံစစ်ဆေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်”
Credit : အထူးဟစ်တိုင်သတင်းစုံ
← နေပြည်တော်မှာ ရဲ နှစ်ယောက်ကို ဓါးနဲ့ဝိုင်းခုတ်သူတွေကို ဖမ်းလိုက်ပြီ
အွန်​လိုင်း​​ပေါ်မှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ လုလု​အောင်​ရဲ့ပုံ​တွေနဲ့ပတ်​သတ်ပြီး ​ပြောလာတဲ့ ​နေခြည်​ဦး →